त्यो बिदाको आइतवार « Postpati – News For All
ऋतु मोक्तान 'युनिसा' पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
उबेला यो आकाशमा कत्तिबेला हवाईजहाज उड्ला भनि हेरी बस्थ्यौं । हेर्दा हेर्दै जहाज छुटिजान्थ्यो । हामी जिल्ल पर्थ्यौं र कल्पन्थ्यौं । जहाजमा के उड्ला ? सपना कि सम्झना ? को उड्ला ? मिलन कि विछोड ? हाम्रा चिनजानका कसैले जहाज चढेको थाहा थिएन ।
त्यतिखेर छुटेको आकाशको त्यो दृष्य अहिले यतिबेला फेला पारेको छु । आज दिनभरिमा एउटै हवाईजहाज उडेन घर सम्झेर आँखा भरी आँसु भयो । अबको दिनमा के हुने हो भनेर सोच्न थाले ।
आखाँबाट ओझेल नपरुन्जेल आकाश हेरि रहे कता हामीलाई पनि लिन आउ छ कि भनी । थाहा छैन पर क्षितिजमा बादलभित्र हराउँदै गरेको त्यो जहाज यो मेरो सम्झनाको प्रिय तस्वीर बन्छ बन्दैन ?
धेरै धेरै वर्षपछि हिजै साँझ रुम बाट उभिएर धेरैबेर आकाश हेरे । साँझको काखमा दिन, उसैगरी आरामसँग निदायो । साँझ, रातको न्यानोमा मस्त भयो । जिन्दगीको भागदौडमा मैले मेरो आकाशै बिर्सेको रहेछु । ताराहरू उस्तै थिए । सानआख्ले तारा, तीनआँख्ले तारा । प्रश्नको तारा । सबै उस्तै थिए । चम्किला, धमिला, उज्याला, अध्यारा सबै सबै आकाशमै भेटिए । जून पनि उस्तै थियो ।
नभेटीएको त म पो रहेछु । फेरिएको त विश्व पो रहेछ भाइरसले ।
दिउँसोको आकाश पनि उबेला झै देखे । निलो । निख्खर । घाम उसैगरी लागेको थियो । उत्तरतिर टल्केका हिमाल उस्तै थिए । अर्घधुम र खिचलाइ पनि कत्ति नजिकै । फुत्तै पुगिएला जस्तो ।
अब यति नै बेला टर्कीको पूर्वतिर हेर्दा हिमाल देखिन्छ अघिल्तिर हेलिकप्टरबाट हरियो छाता (प्यारासुट)समातेर आर्मीहरु झरेको देखिए ठ्याक्कै हाम्रो पुरानै आकाशमा फर्कने थियो । के यो सिपाही हामिलाइ लिन आएको हो र ?
के हामी फ़ेरि आफ्नो देशमा फर्किन पाउला ?
फ़ेरि हामी आफ्नो आफन्त र परिवार साथीहरू संग भेट्न पाउँला ? परिवार ले के खाए ? अहिले के गर्दै होलान् ?
टेलि ईट्टा छापेको आँगनको बाटो अब कहाँ बाँकी छ र टर्की । टर्कीका हरेक आँगन अहिले गेटभित्र सरेको छ । पर्खाल लागेको छ । त्यो ६ दिन घरमा भएको दुख र शुख सुनाउने ठाउँमा पर्खाल लागेको छ । सबै जनालाई आफ्नो
आफ्नो ठाउँमा बन्धन छ ।
आजकल विश्वमा पर्खाल लागेको छ । रंगीन पर्खाल । सेता, नीला, पहेला, हरिया, राता पर्खाल । पहिले कति सजिव र रंगीन लाग्थ्याे मलाई मेराे आइतबार । त्यो त्यही आइतवार जो मैले चाहेको थोक गर्न सक्थे । त्यो बिदाको आइतवार ।
यी रंगीन पर्खालहरुले मेरो ठाउँको रङ नै उडाएछ र हराएछन् मेरो साथीहरू । उनिहरुसंगको भेटघाट विस्तारै हराएछ । चराहरु हराएछन् , परेवाहरु, पुतलीहरु, बसहरु, ट्याक्सीहरु, हेलिकप्टर, जहाज एक एक गर्दै सबै हराएछन् । अर्घधुमा कहिल्यै नभेटिने गरी हराइसकेछन् ।